यौ*न उत्ते*जना बढाउने औषधी सेवन गरेर सम्पर्क गर्दा…. – ताजा समाचार
यौ*न उत्ते*जना बढाउने औषधी सेवन गरेर सम्पर्क गर्दा….
एजेन्सी । यौ८न प्राकृतिक कुरा हो भन्ने जान्दा जान्दै यसको प्राकृतिक नियम विपरीत जाँदा मानिसको जीवन आनन्दमय हुनुको साटो कष्टसाध्य हुने मात्र हैन मृ८त्युका मुखमा समेत पुग्दछ । भारतमा यस्तै एउटा घटना घटेको छ । भारतको गुजरातका २६ वर्षिया किशोर गुप्ताले यौ८न उत्तेजना बढाउने नामक औ८षधि सेवन गरेर आफ्नी केटी साथी नितासंग यौ८न सम्पर्क गर्दा उनको मृ८त्यु भएको हो ।
निताले सो औ८षधि खाएपछि आफ्नो उत्ते८जना थाम्न नसक्दा मृ८त्यु भएको गुजारत प्रहरीले जनाएको छ । किशोरको बयानलाई आधारमान्दै भारतीय मिडियाले लेखेका छन्‘ निता र किशोरबीच नियमित यौ८न सम्बन्ध हुने गरेको भएपनि मङगलबार किशोरले औषधि खाएर यौ८न सम्ब्ध राखेका थिए ।
औषधि खाएको पाँच मिनेट सम्म हामीलाई ठिकै थियो, त्यो भन्दा पछाडि के भयो मलाई थाहा भएन’ किशोरले भने । उनले आफुले झण्डै एक घण्टा पछाडि मात्र आफुलाई सम्हालेको बताएका छन् । आफु सम्हालिएपछि बेहोस भएकी नितालाई उनी आफैले अस्पताल पुर्याएका थिए । घटना कसरी घट्यो भन्ने बिषयमा अस्पतालबाट सार्बजनिक भएको थियो । प्रहरीले किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।